Abamuru nke Ime Soda maka Akpụkpọ Gị - Akpụkpọ Anụ
Top 10 Uru Ime Soda maka Akpụkpọ Gị
Achịcha soda bụ ihe eji esi nri nke eji eme ihe desserts na ihe ndị ọzọ dị mma. Mana nke ahụ abụghị ihe niile ọ na - eme, anyị na - enye gị ihe iri kpatara ị ga - edobe soda n’ime ụlọ gị mara mma dịka ọ nwere ike ịme ihe ebube n’ahụ gị. Site na ihichapụ ihe otutu ka ịdebe ụkwụ gị obi ụtọ, na iwepụ ísì anụ ahụ na mmerụ ahụ na-enwu gbaa, nke a bụ ihe kpatara soda soda bụ ihe eji edozi ụlọ. Anyị na-ekerịta ọtụtụ uru nke soda maka akpụkpọ na ụzọ ziri ezi iji ya iji bulie gị mma .
1. Abamuru nke Soda Ime achịcha Na-acha Ọcha
abụọ. Mmiri Soda maka Banhapụ Pimples
3. Achịcha Soda maka Lightening Spots
Anọ. Ime Soda maka igbochi isi ojii
5. Achịcha Soda maka Iwepu Sel Skin nwụrụ anwụ
6. Ime Soda maka Soft, Pink Egbugbere ọnụ
7. Ime Soda maka Egwuregwu Ejiri Ọchịchịrị na Ikpere
8. Soda na-eme achịcha maka iwepu ntutu isi
9. Ime Soda maka Iwepụ Isi Isi
10. Ime Soda maka Softkwụ Nro
iri na otu. Ajụjụ
Abamuru nke Soda Ime achịcha Na-acha Ọcha
Akpụkpọ anụ na-egbukepụ egbukepụ bụ ihe na-egosi na anụ ahụ siri ike, nke okorobịa na -adịghị mfe. Ọ gwụla ma ị rie nri siri ike, nwee impeccable skincare eme ma hie ụra awa asatọ, itinye ọkụ na akpụkpọ gị adịghị mfe. Agbanyeghị, ihe ndị sitere n'okike ndị jupụtara n'ihe ndị dị mkpa nwere ike ịbịa nyere gị aka. Anyị jiri soda na ihe ọ juiceụ orangeụ oroma iji mee mkpọ a na ihe onwunwe ha na-enyere aka mee ka collagen nke akpụkpọ ahụ dịkwuo elu ma wepụ adịghị ọcha. Oroma juru n'ọnụ vitamin C nke ahụ na-agbakwụnye na-egbukepụ egbukepụ na akpụkpọ gị mgbe soda ji nwayọ exfoliates akpụkpọ wepụ oyi akwa nke nwụrụ anwụ akpụkpọ sel .
Gwakọta otu ngaji nke soda na okpukpu abụọ nke ihe ọ orangeụ orangeụ oroma ọhụrụ.
Ugbu a, ọ dị mfe itinye akwa oyi akwa nke mado a na ihu na olu gị.
Gbalia ihu gi saa ihu gi tupu I mee nke a.
Hapụ ya ka ọ kọọ ihe dịka minit 15.
Jiri akwa owu mmiri, hichaa ya wee jiri mmiri dị jụụ wepụ ihe fọdụrụ.
Jiri ngwungwu a otu ugboro n'izu wepụ ihe nzuzu ma gbakwunye ọkụ ahụ dị gị mkpa.
Mmiri Soda maka Banhapụ Pimples
Na nwayọọ exfoliating ihe onwunwe nke mmiri soda na-eme ka ọ bụrụ ihe magburu onwe ya iji nyere aka gbochie ihe otutu na etuto akpụkpọ gị. Ọ dị mma iji ya na ihu yana mgbe etinyere ya na mmiri. Soda na-enyere aka akpọnwụ akpịrị na ihe ndị na-egbochi nje na-enyere aka igbochi mmebi ọzọ na akpụkpọ gị. Ọ bụrụ na ị nwere arụ ọrụ ihe otutu , nye ọgwụgwọ a nwaa ma ọ bụrụ na akpụkpọ gị emee, wee kwụsị ojiji.
Otu esi eji ya:
Were otu teaspoon nke soda na agwakọta ya na otu ego mmiri iji mee mado.
Hichaa anụ ahụ gị na nhicha ihu wee tinye nke a mmiri soda mado na otutu.
I nwekwara ike iji ya na blackheads na whiteheads.
Hapụ ya ka ọ dị nkeji abụọ-atọ ma sachaa gị mmiri keara washara.
Ebe ọ bụ na nke a mepere pores gị, jiri nwayọ ete akpụrụ akpụ na ihu gị ma ọ bụ tinye toner iji mechie ha ma kpoo akpụkpọ gị.
Ọ bụrụ na akpụkpọ gị adịtụ ntakịrị nkụ, jiri moisturizer na-enwu gbaa ma jide n’aka na ọ bụghị ngwakọta nke pụtara na ọ gaghị egbochi pores gị.
Jiri mado a ugboro abụọ n’izu ka ị hụ mbelata anya n’ahụ.
Achịcha Soda maka Lightening Spots
Nwere ntụpọ na ntụpọ na akpụkpọ gị? Soda na-eme achịcha nwere ike ịbịa nyere gị aka ka ọ dịkwuo mfe. Nke a bụ n'ihi na soda nwere ihe ịcha ọcha nke na-enyere aka ịkwụsị akara na ntụpọ na akpụkpọ ahụ. Ma n'ihi na iji mmiri soda dị ka ọ pụrụ ịbụ ihe siri ike, anyị na-agwakọta ya na ihe ọzọ sitere n'okike iji mee ka ọ dabara maka ngwa anụ ahụ. Na nke a, anyị tinye lemon ihe ọ juiceụ whichụ nke bụ ihe ọzọ na-eme ka ị na-agba ọcha ọcha.
Na efere, tinye otu teaspoon nke soda na pịchaa ihe ọ juiceụ juiceụ nke ọkara lemon na ya.
Gwakọta ha abụọ iji nweta nnukwu mado. Ugbu a dị ọcha ma dịtụ ntakịrị mmiri mmiri, tinye ngwakọta a.
Nwere ike buru ụzọ kpuchie ntụpọ na akara ahụ wee jiri ndị ọzọ tinye n'ọrụ na mpaghara ndị fọdụrụ.
Hapụ ya ka ọ dị nkeji ole na ole wee sachaa nke mbụ gị na mmiri ọkụ wee mechaa jiri mmiri oyi.
Kpochaa akpụkpọ ahụ ma tinye SPR.
Ọ ka mma itinye nke a n'abalị ka anwụ na-acha mgbe ị na-eji ihe ọ lemonụ lemonụ lemon nwere ike ime ka akpụkpọ gị gbaa ọchịchịrị.
Jiri nke a otu ugboro ma ọ bụ ugboro abụọ n’izu iji hụ mgbanwe ndị a na-ahụ anya.
Ime Soda maka igbochi isi ojii
Ọ bụrụ na ị nwere mmanu mmanu , Ohere inweta bụ, ọ na-adịkarị nro na isi ojii nke na-egosipụtakarị na ihu gị. Ma ọ bụrụ na ị nwere nnukwu pores, omume nke nsogbu ndị a ka ukwuu, na-eme ka ihu gị ghara ịdị ọcha. Mmiri soda nwere ike inyere aka wedata mbipụta a site na imechi akpa akpụkpọ ahụ gị ma belata ha ntakịrị na ọdịdị. Ngwurugwu a nwere ihe yiri astringent nke na-enyere aka mechie pores ahụ ma gbochie ha ikpuchi na unyi nke na-eweta isi ojii na otutu. Nke a bụ ihe ịkwesịrị ime.
Were otu ngaji mmiri soda tinye ya na karama ịgba.
Ugbu a, jupụta ya na mmiri na ịma jijiji nke ọma mix abụọ.
Jiri ihe nhicha sachaa ihu gị ma hichaa ya na ákwà nhicha, wee fesa ihe ngwọta na ihu gị ma hapụ ya ka akpụkpọ gị wee nwee mmiri.
Nke a ga - enyere aka mechie pores. Nwere ike ịchekwa azịza ya na friji ka ọ rụọ ọrụ nke ọma.
Mee nke a ka ọ bụrụ akụkụ nke ememe ịsacha gị kwa ụbọchị iji gbochie ahụhụ akpụkpọ. Nwere ike itinye moisturizer ihu gị mgbe ị na-eji toner a.
Achịcha Soda maka Iwepu Sel Skin nwụrụ anwụ
Unyi, unyi, mmetọ na-adakarị na akpụkpọ anyị ma ọ bụghị mgbe niile ka anyị na-asacha ihu anyị mgbe niile. Iji wepu obere irighiri uzuzu a, anyi choro ihe nchacha nke oma nke na-ehicha oghere ma na-ewepu ihe ndi a. Ihupu ihu na-abata n'aka maka ahụhụ dị otú ahụ. Soda na-enyere aka ịmịcha anụahụ nke na-ewepu mkpụrụ ndụ akpụkpọ anụ nwụrụ anwụ yana adịghị ọcha ndị a.
Were otu ngaji mmiri soda na ọkara okpokoro mmiri.
Ebum n’uche bu ime mkpuru ahihia ka o nwee ike igbapu akpukpo ahu ma jide n’aka na o gaghi etinye mmiri.
Mgbe ị sachara ihu gị, tinye nsị a na mmegharị okirikiri, jiri nlezianya zere ebe gburugburu anya.
Jiri mmiri saa anya wee sachaa ihu gị.
Tinye moisturizer iji zere anụ ahụ iwe iwe.
A sikrob adabara akọrọ na chebaara anụ ma na-arụ ọrụ kasị mma na mmanu mmanu ka Nchikota akpụkpọ pịnye.
Jiri otu ugboro n’izu mee ka anụ ahụ gị dị mma.
Ime Soda maka Soft, Pink Egbugbere ọnụ
Omume na-adịghị mma dịka ịse anwụrụ, ịse egbugbere ọnụ gị na ọbụlagodi na-ete egbugbere ọnụ ogologo oge nwere ike imerụ egbugbere ọnụ gị ma mee ka agba ha gbaa ọchịchịrị. Ọ bụ ezie na ọtụtụ n’ime anyị nwere egbugbere ọnụ pink dị iche iche, onyinyo ahụ na-agbanwe mgbe anyị na-adịghị elekọta ha nke ọma. Anyanwụ ikpughe bụ ihe ọzọ kpatara egbugbere ọnụ gbara ọchịchịrị . Ọ bụrụ n’ịchọrọ ị nwetaghachi ụcha eke ha, soda nwere ike inye aka. Anyị na-agwakọta ya na mmanụ a honeyụ ka ọ ghara ịdị oke ike na anụ ahụ dị nro ma mee ka ọ dịkwuo ya mma.
Chọrọ nha nha nke soda na mmanụ a honeyụ na ebe ọ bụ maka egbugbere ọnụ, ị chọghị karịa ngaji.
Ọ bụrụ na egbugbere ọnụ gị kpọrọ nkụ, tinye mmanụ a honeyụ karịa soda.
Gwakọta nke ọma ma tinye nke a na egbugbere ọnụ, na-ete na obere, okirikiri.
Nke a ga - enyere aka kpochapụ ha ma kpochapụ mkpụrụ ndụ akpụkpọ anụ nwụrụ anwụ.
Mmanụ a honeyụ ga-ewepụ adịghị ọcha ma tinyekwa mmiri dị ezigbo mkpa.
Kwe ka mkpọ a nọrọ na egbugbere ọnụ ruo minit ole na ole tupu ị jiri nwayọ sachaa ha na mmiri ọkụ.
Tinye egbugbere ọnụ na SPF mgbe usoro ahụ gasịrị.
Ime Soda maka Egwuregwu Ejiri Ọchịchịrị na Ikpere
Akpụkpọ anụ mara mma abụghị oke mma, mana ọbụlagodi ụmụ nwanyị kachasị mma na-enwekarị ikiaka na ikpere gbara ọchịchịrị. Ọ bụrụ na ọdịiche a na agba akpụkpọ ahụ na-ewute gị, ịnwere ike ịmụrụ ya ọkụ site na iji mkpọ a. Anyị na-eji soda na ihe ọ juiceụ juiceụ nduku , ha abụọ nwere ihe na-acha ọcha ọcha. Ebe ọ bụ na ebe ndị a nwere akpụkpọ anụ karịa ihu, onye ọ bụla nwere ike iji ya n'enweghị nsogbu ọ bụla na-enweghị nkụ. Mana anyị na-akwado iji moisturizer na SPF kwa ụbọchị iji mee ka ebe ndị a dị nro.
Bechaa otu obere nduku wee ghaa ya nke ọma.
Ghichaa ihe ọ itsụ itsụ ya na nnukwu efere wee tinye teaspoon nke soda maka ya.
Gwakọta nke ọma ma jiri bọl owu, tinye ihe ngwọta a na ikpere gị na ikpere.
Hapụ ya maka nkeji iri ka ihe ndị ahụ wee rụọ ọrụ anwansi ha, wee sachaa ya n'okpuru mmiri na-agba agba.
Tinye sunscreen moisturizing mgbe etinyechara ya.
Jiri ogwu a otu ugboro ma ọ bụ ugboro abụọ n'izu ma n'oge na-adịghị anya akpụkpọ gị ga-adị ka ndò dị mfe.
I nwekwara ike iji ngwọta a na apata ụkwụ dị n'ime ọchịchịrị na n'okpuru.
Soda na-eme achịcha maka iwepu ntutu isi
Ingrown toro ntutu bụ ihe iyi egwu dị ka ọ na - egosi dịka akpụ siri ike na anụ ahụ ma jụ ịla rue mgbe ọ tweezed. Ingrowth bụ ntutu isi na-eto n'ime ntutu kama ịpụtapụta nke na-eme ka o sie ike iwepụ ya na mbụ ụzọ mwepụ ntutu dị ka ịkpụ afụ ọnụ na waksị. Ọ bụ ezie na o siri ike ịkwụsị kpamkpam ntutu ntutu na-adịghị mma, i nwere ike iji mmiri soda na ihe ole na ole ndi ozo wepu ya . Ọtụtụ mgbe, ụmụ nwanyị nwere ntutu dị ukwuu ma ọ bụ ụdị mmanu mmanu na-adịkarị nro ntutu.
Mbụ ịhịa aka mmanụ castor n'ime akpụkpọ gị ebe ị gbanyeworo ntutu.
Ozugbo akpụkpọ ahụ gbanyere mmanụ ahụ, hichapụ mmiri mmiri na-eme ka ị ghara iji pọmpụ na-eme.
Ugbu a, gwakọta soda na ọkara nke mmiri iji mee nnukwu mado.
Ghichaa nke a na mpaghara emetụtara ka ọpụpụ ya. N'iji tweezer, kpochapu ntutu a na-etinye n'ime ala.
Tinye akwa ekike owu tinye n'ime mmiri oyi iji mechie pores ahụ.
Mmanụ ahụ na-ejide n'aka na akpụkpọ gị adịghị akpọ nkụ na iwe, ebe soda na-enyere aka ịtọpụ ntutu isi na follicle.
Ime Soda maka Iwepụ Isi Isi
Soda na-eme achịcha nwere ọtụtụ ihe na-eme ka ọ bụrụ ihe dị egwu. Ọ bụrụ na ị bụ onye ọsụsọ na-agba agba ma nwee isi anụ ahụ, soda nwere ike ịbịa nyere gị aka . Nke a bụ maka na o nwere ihe na-egbu nje na - egbu nje na - ebute isi. Soda na-amịkọrọ mmiri dị oke mmiri mgbe ọsụsọ na-edozi ahụ gị. Nke a na - enyere aka ọ bụghị naanị ịchịkwa isi ísì , ma na-ewetakwa ọsụsọ.
Were tablespoon nke mmiri soda ma gwakọta ya na akụkụ ndị hà nhata nke ihe ọ lemonụ lemonụ lemon ọhụrụ.
Ozugbo inwere akwa tapawa, tinye ya n’ebe ọsụsọ na-agba gị dịka akarị, azụ, olu, wdg.
Hapụ ya ka ọ nọrọ nkeji iri na ise wee pịa igwe saa ahụ. I nwekwara ike ịchekwa ngwọta a n'ime karama ịgba na spritz ya otu ugboro n'ụbọchị tupu ịsa ahụ.
Mee nke a otu izu ma belata ya kwa ụbọchị ọzọ mgbe ị hụrụ ka ọ na-arụ ọrụ.
Ime Soda maka Softkwụ Nro
Ourkwụ anyị chọkwara ụfọdụ TLC mana anyị anaghị agbakarị ha ezuru. Iji mee ka ha yie ndị mara mma ma na-adị nro, anyị kwesịrị ilekọta ha anya. Ọ bụrụ na ịchọghị ịga maka usoro ịkpụcha mbọ aka na salon, ị nwere ike iji soda na-eme ka ọkpụkpọ dị nro na ọbụna nhicha mkpịsị ụkwụ gị. Ihe a na-ekpofu mmanụ na-enyere aka wepu mkpụrụ ndụ akpụkpọ anụ nwụrụ anwụ ma mee ka ụkwụ gị dị nro, ebe ọrụ antibacterial na-egbochi ọrịa.
Jupụta ọkara ịwụ na mmiri ọkụ ma tinye ngaji atọ nke soda.
Kwe ka ọ gbasaa wee tinye ụkwụ gị na ngwọta maka nkeji 10.
Debe okwute na-esote gị n'akụkụ nke ị nwere ike iji wepụ akpụkpọ anụ nwụrụ anwụ na mkpụrụ obi gị.
Ozugbo ịmechara, jiri mmiri na-ehicha ụkwụ gị ma hichaa ha.
Mgbe ahụ tinye ude mmiri na-etinye sọks ka ha wee nwee nchebe.
Mee nke a ma ọ dịkarịa ala otu ugboro n'ime ụbọchị 15 na ụkwụ gị ga-ekele gị maka ya.
Q. Soda na isi nri na soda dika soda?
.B.. Ọ bụ ezie na soda na soda na-esi nri bụ otu ihe, naanị aha dị iche, kemịkal nke ntụ ịme achịcha dị iche na soda. Nke ikpeazụ a siri ike dịka ọ nwere pH dị elu, nke na-eduga na ịrị elu nke mgwakota agwa mgbe ejiri ya mee ihe. Ọ bụrụ na ị na-edochi teaspoon nke ntụ ntụ na soda, ị ga-achọ naanị teaspoon 1/4 nke soda maka nsonaazụ achọrọ.
Q. Gịnị bụ akụkụ-mmetụta nke mmiri soda?
.B.. Akụkụ-mmetụta nke na-ewe soda na ngafe tinyere gas , bloating na ọbụna afo iwe. Mgbe ị na-eji maka ebumnuche mara mma, ọ ga-adị mma ka ị jiri ya dịka atụziri ya site na ịgbanye ya, nke mere na ike iwe ya belatara. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị nwere ọnọdụ akpụkpọ, ọ kachasị mma ịkpọtụrụ onye na-ahụ maka ọgwụ gị tupu i jiri ya mee ihe.
Q. Otu esi eme soda ihe eji ekpuchi ihu?
.B.. Anyị edepụtara ọtụtụ ụzọ iji soda nke dị n'elu, ma ihe nkpuchi ihu ọzọ dị mfe nke ị nwere ike iji ihe akụrụngwa a bụ site na ịgwakọta ya na mmiri ara ehi. Were otu teaspoon nke soda na ngaji nke mmiri ara ehi ma gwakọta ha nke oma. Liquid ga-enwe mmiri mmiri na-agba ọsọ. Tinye ya na ihu gi obula ma hapụ ya maka nkeji iri tupu ịsa ya mmiri keara keara. Echefukwala itinye mmanụ na-edozi mmiri mgbe nke a gasịrị. Nwere ike iji nke a otu ugboro n’izu iji kpochapụ unyi n’ihu gị.
Q. Soda dị mma maka anụ ahụ dị nro?
.B.. Akpụkpọ anụ na-emetụ n'ahụ na-eme ngwa ngwa ngwa ngwa n'ihi nhazi ya. Soda na-eme achịcha nwere ike ịbụ ihe siri ike maka ụdị anụ ahụ. Ọ bụrụ na ị nwere anụ ahụ dị nro, ị kwesịrị ime nyocha ịmachi na ogwe aka gị tupu itinye ngwugwu ọ bụla nwere soda. Ọ bụrụ na enweghị iwe ma ọ bụ ọbara ọbara, ị nwere ike iji ya. Agbanyeghị, anaghị eji ya oge niile otu izu bụ ezigbo.
Nwekwara ike ịgụ 5 Egwuregwu na-agbanwe mma hacks iji soda
kedu ka esi belata ntutu ịda
Hollywood na fim zuru oke
kacha mma songs ịnụ
otu esi etolite oji oji ngwa ngwa ndozi ụlọ
ihe ngosi onyonyo dika ihe ndi ala ozo